Iza moa i NY RADO RAFALIMANANA
mosxx le Lun 06 Mai 2013, 09:17
-Niara-nianatra taminay tao amin'ny Gallieni Ny RAdo.
Ankizy toy ny ankizy rehetra i Ny Rado fa ny tena nahatadiavana azy dia izy dia mpitarika hatrany fa tsy natao ho taritina.
Ankizy moyen ihany koa izy amin'ny resaka fianarana na azo atao hoe "parmi les 10 premiers" aza.
Saingy tsy afaka bacc izahay dia lasa tany France izy nanala bacc dia nahazo bacc tany.
Ary nanandrana nanohy fianarana tany saingy Ny Rado dia tia milalao ary madiditra dia tsy tamana tany ka nody teto an-tanindrazana ary nanangana ny orin'asa Lemon Ltd (galerie PRISMM andrefan'Ambohijanahary)
Izy no malagasy voalohany nanangana ny solosaina mitondra ny marika malagasy saingy naleon'ny mpanjifa nividy ny avy any ivelany.
Ny solosaina lemon moa dia saika hevitra mitovy amin'ny apple ihany.
Nandritra ny fotoana naha -mpandraharaha azy dia nanohy ny fianarana tao amin'ny ISPM izy.
Izy moa zanaky ny profesora Rafalimanana Patricia etsy Analakely (Institut d'Hygiène) - Ary ny rainy dia SG an'ny ministeran'ny fampianarana.
Nahafehy ny fianarana nataony izy - ary nahafehy ny asa varotra nataony.
Ka nahazo tsena lehibe avy tamin'ny mpamatsy vola ho an'ny ministeran'ny fampianarana nahafahany nampiriborobo ny orin'asany.
Saingy vokatry ny fifaninanana indrindra tamin'ingahy Andry Ranaivo (CONCEPT: samy mpiara-mianatra taminay: cocobe no fiantsoanay azy) dia nisitaka ny sehatra teknolojia ny Axius fa nanao diversification ka nanangana ny AXIUS holding (axius tourism : fanofana fiarakodia, sy sambo ary trano fandraisam-bahiny any Ambila Lemaitso)
Axius holding: resaka negoce
Nandritra izany dia voaray ho mpitantana ny tetik'asa MCA Madagasikara izy ary efa nametraka fangatahana ny ho lasa tale jeneraly saingy tsy voaray ny fangatahiny.
Anisan'ny niara-niasa betsaka tamin'ny fitondrana teo aloha izy ary nahazoany fifandraisana akaiky tamn'ireo mpandrahara avy any amin'ny faritra arabia saoudita izany, ka nahazoany ny tsena famatsiana sakay Pili -pili.
Tamin'ny taona 2009 dia nopotehina tsy misy noraisina ny orin'asa Axius Holding.
Nodorana ny fambolena tany Mahajanga
Nopotehina ny siège tetsy isokara.
Nopotehina ny trano fandraisam-bahiny teny Ambila Lemaitso.
Voatery nitso-ponenana tany Dobai ny tenany vokatr'izany.
Betsaka ny zavatra azon'i Ny Rado atao amin'ny fiainana fa tsy mbola fotoana hirotsahana amin'ny présidence de la république izao raha ny hevitro.
Ny programa samy afaka mamorona fa ny fanatanterahana izany dia mbola ilana personnalité matanjaka kokoa.
» Rado Kirov